सरकारी प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूको सेटिङमा निजी अस्पतालहरुले कोरोना परीक्षण शुल्क असुल्दै #Covid19 • Health News Nepal
सरकारी प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूको सेटिङमा निजी अस्पतालहरुले कोरोना परीक्षण शुल्क असुल्दै आएका छ्न।
हवाई जहाज मार्फत विदेशबाट फर्किएका धेरै व्यक्तिहरु घर जानुभन्दा पहिले काठमाडौंका नीजि अस्पतालहरुबाट स्वइच्छाले कोरोना परीक्षण गराएर फर्किने गरेका छन्। पोखराका एक व्यक्ति ओमानबाट फर्किदा एयरपोर्टबाट सिधै नाम चलेको एक निजि अस्पतालमा पुगी कोरोना परीक्षण इच्छा जाहेर गर्दै परीक्षण शुल्क कति लाग्छ भनी प्रश्न गरे , सहायता केन्द्रमा बसेका एक कर्मचारीले पहिले टेकु प्रयोगशालामा जानु पनि जवाफ फर्काएँ।
मलाई रिपोर्ट छिटो चाहिएको थियो ! मसँग उतैको पि सि आर नेगटिभ रिपोर्ट पनि छ ! तर घर जानुभन्दा पहिले ढुक्क भएर जान खोजेको मात्रै हो ! टेकुमा भिडभाड हुन्छ यहीँ परीक्षण हुन्न र ; त्यसपछि तिनै कर्मचारीले १०,०००/- लाग्छ, हामी स्वाब नमुना लिएर टेकु पठाईदिन्छौं , अनि रिपोर्ट बेलुकासम्म दिन सक्छौं भनिन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो , अहिले दिनहुँ दुई सयभन्दा बढी विदेशबाट फर्किएका अथवा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु निजी अस्पतालहरुबाट सरकारी प्रयोगशालाका परीक्षण रिपोर्टहरु प्राप्त गर्दैछन्।
मन्त्रालयले पाटन, महाराजगंज र वीर अस्पताललाई सशुल्क निःशुल्क दुवै तरिकाले परीक्षण गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु बाट निशुल्क मात्रै परीक्षण हुँदै आएको छ। यी सरकारी प्रयोगशालाहरुमा कुनै व्यक्ति आफैँ परीक्षण गराउँन जादा छिटोमा दुई दिनपछि मात्र रिपोर्ट प्राप्त गर्ने गरेका छन्। तर निजी मार्फत सरकारले तोकेको भन्दा ४-५०००/-बढी शुल्क तिर्दा एकदिनमै रिपोर्ट प्राप्त गर्ने गरेका छन्। यसरी निजि अस्पतालहरुबाट सरकारी प्रयोगशालाहरुको परिक्षण रिपोर्ट हरु सजिलै प्राप्त हुनुमा सरकारी प्रयोगशालाहरु कर्मचारीहरूको मिलिमतो स्पष्ट हुन्छ।
सरकारी प्रयोगशालाहरुमा निःशुल्क परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरूको फर्म छानबिन गर्ने हो भने यो अझै स्पष्ट हुनेछ।